खजाना खोलेजस्तो - Shikshak Maasik
by • • Highlight, पुष्तक समिक्षा • Comments (0) • 218
– मोहन मैनाली
जीवन र जगत् बारेमा बुझाउन डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ नेपाली लोकगीतको एउटा टुक्रा सापट लिन्छन्  । गीतले भन्छ– ‘चैत जाँदो वैशाख लाग्दो, सुन हजुर सालको पात पलायो  । त्यसपछि उनी भन्थे, चैत जाँदा/वैशाख लाग्दा सालको जुन रूखमा नयाँ पात पलाउँदैन, त्यो रूख मर्यो भन्ने ठान्नू ।
पत्रकारिताका सिलसिलामा जानकारी संकलन गर्दाका अनुभव बताउनुपर्ने ठाउँमा म थोरै गर्ब र धेरै दम्भका साथ भन्ने गर्थें– ‘गाडीको बाटोलाई छाडेर बेनीघाटबाट बूढीगण्डकी नदीको पानीढलो घुमेर मर्स्याङ्दीको पानीढलोमा पसेर गोरखा बजार आइपुग्दा मात्र गाडी हामीले गाडी देख्न पाएका थियौँ । यति बाटो छिचोल्न हामीलाई २६–२७ दिन लागेको थियो ।’ अब यसो भन्न मैले कि त छाड्नुपर्यो, कि त श्रेष्ठको यो किताब नपढेका/नपढ्ने मानसिको हूल फेला पार्नुपर्यो ! दुई वर्षपहिले डा. श्रेष्ठले मलाई मैले पैदल घुमेका ठाउँको नक्सा मागेका थिए । मैले फुर्तीसाथ नेपाल र त्यसको केही पश्चिममा पर्ने भारतका विभिन्न ठाउँमा म हिँडेको बाटो नक्सामा उतारेर दिएको थिएँ । अहिले आफैँलाई लाज लागेर आयो । म जन्मनुअघिदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तरजस्तो हिँडेर ज्ञान र अनुभव बटुलिरहने मान्छेका अगाडि जीवनको छोटो समयमा केही दिन पैदल हिँडेर जानकारी बटुल्ने मान्छेले फुर्ती लगाएकोमा । पैदल हिँडेर भेला गरिएका सामग्रीको महत्त्व र गुरुत्व अलग हुन्छ । ‘प्रकृति अध्ययनका क्रममा हाम्रा सबै इन्द्रिय परिचालन हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
‘नेपाल अध्ययन (भाग १) : भू–स्वरूप र हावापानी’
यस पुस्तकमा अरू पनि धैरे कुरा छन् । भूकडी र भूसेतु, जलवायु परिवर्तन र पहाड, पानी, महत्त्व बोकेका केही स्थान, भूकम्प र हामी गरी पाँचवटा खण्डमा छरिएका २१ वटा निबन्धमा तिनै ठाउँलाई भूस्वर्ग बनाउने जीवित र निर्जीव तत्त्वका कुरा छन् । यस पुस्तकमा संग्रह भएका सामग्री यसअघि शिक्षक मासिकमा छापिएका थिए । त्यसो भनेर यिनका सन्दर्भ कत्ति पनि पुराना भएका छैनन् । ‘अँध्यारोमा बसेका मानिसलाई बिजुलीको उज्यालो भएका ठाउँमा पुर्याउनु एउटा कुरा हो भने अँध्यारोमा बसेका मानिसबीच बिजुली पुर्याउनु अर्कै कुरा हो,’ श्रेष्ठले एक ठाउँमा लेखेका छन् । यो विकासको मोडेलको कुरा पनि हो । कुनखालको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हो । अहिले अँध्यारोमा बसेका मानिसलाई बिजुली पुगेका ठाउँतिर तान्ने/धकेल्ने खालको विकास भइरहेको छ । त्यसले गर्दा बिजुली पुगेका र नपुगेका दुवै ठाउँको बिजोग भएको छ । लेखकले भनेझैँ गर्नसके नेपालका गाउँ बाँझो बसेका अनि खानेकुरा विदेशबाट बेसाउनुपरेको खबर सुन्नुपर्दैनथ्यो होला ।
विपद् आइलाग्नुभन्दा पहिले सूचना दिन सके धेरै मानिसको ज्यान जाँदैन । केही वर्षअघि आएको एउटा विपद्बारेमा उनले लेखेका छन्, ‘हुडहुड आउँदै छ भन्ने मौसम पूर्वानुमानका समाचार मनाङमा चौंरी चराउने गोठालाहरूले १२ घण्टा जति अगाडि मात्र पाएका भए आठ ज्यान हिउँमा पुरिनुपर्ने थिएन । …आठ नेपालीसहित १२ पर्यटकको मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने थिएन । …अब त चेतौँ ।’ ‘ज्यान जाला चेत्दिनँ’ भनेर बसेपछि कहाँ चेतिन्छ र ? उनले यो कुरा लेखेको झन्डै साढे चार वर्षपछि हिजोअस्ति बारा पर्सामा भुइँभुमरी आउनुअघि हामीले त्यसको खबर दिन सकेनौँ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा यसअघि भोग्नु नपरेका भुमरीजस्ता विपद् आउँछन् भनेर डा. श्रेष्ठले नै निकै पहिले हामीलाई सचेत गराएकै थिए ।
सधैँभरि हाँसिरहने फूललगायतका वनस्पतिको अध्ययनले हो कि, जन्मजात क्षमताले हो कि, रुचिले पो होला कि, कि घुमेका ठाउँ अनि भेटेका मान्छे, संगत गरेका साहित्यकार अनि अध्ययन गरेका साहित्यले हो कुन्नि डा. श्रेष्ठको कलम रोचक बाटो भएर हिँड्छ । यत्रो दुःख गरेर भेला गरेका, आफ्नो लामो र सदा सक्रिय जीवनका अनुभवसँग घोलेर सुन्दर प्रस्तुतिमा उनिएका यस किताबका सामग्री पढ्न अल्छी गर्यौँ भने त हामी लास्टै अल्छीमा गनिएलाउँ कि !
२०७६ जेठ ४ गते शनिबार